BOSHIH IMBWA INOBEREKA RUZIVO UYE MIFANANIDZO - IMBWA
BoShih Imbwa Inobereka Ruzivo uye Mifananidzo
Boston Terrier / Shih-Tzu Mhando Dzakasanganiswa Dzembwa
'Uyu mufananidzo wemukadzi wedu weBoston Terrier / Shih Tzu musanganiswa. Anonzi Bailey uye ane makore maviri ekuberekwa pamufananidzo. Anorema 23 lbs. uye ane hushamwari. Anoda vanhu, kunyanya vana, uye dzimwe imbwa. Akanga ari nyore kwazvo dzimba uye akangwara kwazvo. Anotamba uye anoda kushambira. Anomhanya chaizvo imbwa diki uye akasimba pahukuru hwake. Aive akareruka chaizvo kurovha chitima nekuti kuenda kunofamba ndechimwe chezvinhu zvake zvaanofarira kuita. Haana kumbobvira arwara nemota uye anongohukura kana chimwe chinhu chiripo. Iyo yakasarudzika tsika yakaipa yandinogona kufunga ndeye iye anofarira kuchera uye ane mamwe akakomba nzara. Murapi wedu anoda rudzi urwu uye anoti ane hutano hwakanaka. Isu tinofara kwazvo nerudzi urwu rwakavhenganiswa uye tinowana akawanda mazwi paari. Ane vanin'ina vapfumbamwe kubva kumatara maviri akasiyana uye munhu wese anovada zvakanyanya nekuti ivo vakanaka nevana uye vanotamba kwazvo. '
Iyo BoShih haisi imbwa yakachena. Muchinjikwa pakati pe Boston Terrier uye iyo Shih-Tzu . Nzira yakanakisa yekuziva hunhu hwesanganiswa yakavhenganiswa ndeyekutarisa mhando dzese mumuchinjikwa uye uzive kuti iwe unogona kuwana chero musanganiswa wechero hunhu hunowanikwa mune chero rudzi. Haasi ese eaya akagadzika imbwa dzakauchikwa dziri kuberekwa dziri 50% dzakachena kusvika ku50% dzakachena. Zvakajairika kuti vafudzi vaberekane mizhinji-chizvarwa michinjikwa .
Lucy the BoShih (Boston / Shih Tzu hybrid) pamwedzi gumi uye mapaundi manomwe
Cuddles naFrenchie, maBoshihs maviri (Boston Terrier / Shih-Tzu musanganiswa) - 'Cuddles ane nzeve dzake pasi uye Frenchie ndiye ane nzeve dzake kumusoro. Amai vavo vaive vakanyorwa mapepa eBoston Terrier uye baba vavo Shih-Tzu. Kurema kwavo kuzere kwakazara anenge mapaundi makumi maviri. Ndidzo imbwa dzinodiwa kupfuura dzose! '
Bo-Shih mwana ane mwedzi mina-baba vacho vane 13-lb. sirivheri uye chena AKC Shih Tzu uye amai vacho i11-lb. AKC Boston Terrier.
Bo-Shih mwana wemwedzi mina
Bhatisa iyo BoShih sembwanana-yevhiki-sere-— 'Tangova naye, asi atove nerudo, anotamba uye akangwara kwazvo. Akatotanga kudzidziswa kwehari . Zvinofanira kunge zviri nyore kumuita kuti adzidziswe. '
'' Kudhinda mativi matatu eBoston Terrier / imwe kota Shih Tzu. Iye ane hupenyu kwazvo, ane rudo, anoda kubata vanhu imbwa. Kana yakatemwa anotaridzika angangoita ese eBoston, iyo Shih Tzu chinhu chinoratidza mune jasi, iri iri yepakati kureba kureba, uye pamwe mumaziso. Anoda kuchovha mumota uye kubva padiki diki anga aine tsika dzakanaka dzemota nedzidzo diki. Anogara nekatsi, kitsi nembwa yakura. '
Chinyorwa cheBoston Terrier Sanganisa Mbeu Dzakabereka
gonzo terrier american eskimo musanganiswa
chii imbwa daisy
teacup yorkie uye shih tzu musanganiswa
mifananidzo ye pitbull chihuahua mix
yekumadokero yakaonekwa orb weaver ine chepfu
peek pom pom imbwa dziri kutengeswa